Jiri onye ntụgharị okwu ozigbo: Smartphone ma ọ bụ ngwaọrụ zụta 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Mgbe anyị na-eme njem na mba ofesi, nsogbu kacha bụ doro anya asụsụ ala ọzọ: ọ bụ ezie na ugbu a onye ọ bụla na-asụ obere bekee, ọ nwere ike isiri anyị ike ime ka ndị obodo ahụ ghọta anyị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha na-ekwu nke ha. ire. Ọ dabara nke ọma, nkà na ụzụ ntụgharị asụsụ abịawo ogologo oge na afọ ndị na-adịbeghị anya ma ọ ga-ekwe omume, jiri obere ngwaọrụ, nweta ntụgharị asụsụ ngwangwa na ọsọ ọsọ mgbe anyị na-amalite mkparịta ụka.
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị ga-egosi gị n'ezie ndị nsụgharị ozugbo kacha mma na ị nwere ike ịzụta n'ịntanetị ka ị nwee ike ikwu okwu na ịsụgharị gaa na asụsụ obodo na ntụgharị ọzọ ige ntị na mkparịta ụka nke ndị anyị na ha na-asụ ma ghọta okwu nke ọ bụla kwuru. Ngwaọrụ ndị a bara uru ma baa uru ma enwere ike iji ya mee njem ọ bụla na mba ọzọ.
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Ngwaọrụ asụsụ na asụsụ ntụgharị asụsụ kachasị mma maka ngwa gam akporo na iPhone
Ezigbo ndị nsụgharị
Ndị ntụgharị okwu ozugbo nwere ụdị ọrụ dị iche iche yana, tupu ha azụta ụdị nke mbụ anyị hụrụ ozugbo, ọ bara uru ileba anya na njirimara ngwaọrụ ndị a kwesịrị inwe, yabụ họrọ naanị ụdị ndị kacha dabara maka mkpa anyị. ntụgharị asụsụ chọrọ.
Real oge ọrụ ntụgharị okwu
Ezigbo onye ntụgharị okwu ga-enwerịrị njirimara ndị a iji kọwaa ya otu a wee nwee ike ịzaghachi mkpa ntụgharị asụsụ anyị niile:
Asụsụ akwadoro- otu n’ime mkpụrụ okwu kachasị mkpa, ebe enwere ọtụtụ ndị ntụgharị ozugbo na anyị ga-ahọrọ nke na-akwado opekata mpe asụsụ ma ọ bụ asụsụ ndị kachasị ewu ewu anyị nwere ike ịnwe nsogbu mgbe anyị nọ mba ọzọ. Yabụ ka anyị jide n'aka na ọ na-akwado Bekee, Spanish, French, Russian, Chinese, Japanese, Hindi, na Portuguese.
Zọ ntụgharị- Na mgbakwunye na asụsụ ndị akwadoro, ka anyị hụ na onye ntụgharị ozugbo ahọpụtara nwere ụdị ntụgharị ntụgharị dị iche. Nke kachasị mfe bụ nsụgharị ntụgharị (site na asụsụ A ruo n'asụsụ B ma ọ bụ nke ọzọ), ebe ụdị dị oke ọnụ ma dị elu na-enye ohere ntụgharị asụsụ ozugbo na asụsụ abụọ dị iche iche, na-enweghị ịpị bọtịnụ ma ọ bụ tọọ asụsụ tupu mkparịta ụka (ntụgharị bidirectional) .
Njikọ: iji nwee ike ịtụgharị asụsụ nke ọma na ọsọ ọsọ, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị nsụgharị ozugbo ga-ejikọrịrị na Internetntanetị, iji rite uru site na igwe ntụgharị asụsụ ntanetị na ọgụgụ isi nke ndị nrụpụta nke ngwaọrụ ndị a mepụtara. Simpledị kachasị mfe jikọtara na Bluetooth na smartphone (nke ga-ejikọ ya na alwaysntanetị mgbe niile), ebe ụdị ndị ọzọ dị oke ọnụ nwere Wi-Fi, Bluetooth na kaadị SIM raara onwe ya nye iji nwee ike ijikọ onwe ha n'ọnọdụ ọ bụla.
Onwe ya: dịka ndị a bụ ngwaọrụ enwere ike ibugharị, ha nwere batrị lithium-ion dị n'ime, nwee ike ịkwado ọ dịkarịa ala awa 5-6 nke ntụgharị asụsụ tupu ebudata ya kpamkpam. N'okwu a, ọ dị mkpa iburu chaja USB dakọtara ma ọ bụ, ebe ọ bụ na anyị nọ mba ofesi, yana nnukwu bank nke zuru oke (dị ka ndị a hụrụ na ntuziaka ahụ) Otu esi eme ka smartphone gị na-ebubo mgbe niile).
Nha na ọdịdị- shapedị na etu onye ntụgharị ahụ dịkwa ezigbo mkpa, ka onye ntụgharị ozigbo kwesiri ịdị mfe ijide ma dịkwa mma iji gbanye ma gbanyụọ mgbe ọ dị mkpa. Ọ bụ ezie na ngwaọrụ dị iche iche nwere ụdị dị iche iche dị, anyị na-anwa ịgbadokarị ụdị nwere ụdị ergonomic (n'ụdị ndị na-edekọ olu).
Ọ bụrụ na ngwaọrụ ndị ahụ na-asọpụrụ njirimara ndị a, anyị nwere ike igosi ha na anya anyị mechiri emechi, na-ejidekwa nsonazụ ọma.
Ndị ntụgharị okwu ị nwere ike ịzụta
Mgbe anyị hụrụ ọrụ ndị nsụgharị ozugbo kwesịrị inwe, ka anyị hụ ọnụ ngwaọrụ anyị nwere ike ịzụta na Amazon, nke bụ otu n'ime akara ngosi maka azụmahịa kọmputa n'ịntanetị n'ihi nkwa zuru ezu, nke anyị na-ekwukwa banyere ya. . Amụma Amazon weghachitere ego ha riri n'ime afọ abụọ.
N’etiti ndị ntụgharị na pere mpe na ndị dị ọnụ ala n ’anyị ga-achọta Travis Touch Gaa, dị na Amazon maka ihe na-erughị € 200.
Ngwaọrụ a nwere ike ịsụgharị asụsụ 155 na ọnọdụ bidirectional (yana ntụgharị nwere ike nweta na ihe na-erughị nke abụọ), nwere Wi-Fi, njikọta na njikọ data data (site na eSIM) ma, ozugbo ejikọrọ na Internetntanetị, na-eji ọgụgụ isi dị elu. artificialgwé ojii ígwé ojii iji nyere anyị aka ntụgharị asụsụ ozugbo. Onye ntụgharị a yana ihuenyo mmetụ 2,4 nke anụ ọhịa na ọtụtụ igodo ọrụ iji họrọ asụsụ ha ga-atụgharị.
Ezigbo onye ntụgharị ntụgharị ozigbo anyị nwere ike ịtụle bụ Smart Vormor Onye Ntụgharị, dị na Amazon maka ihe na-erughị € 250.
Ngwaọrụ a nwere ụdị ergonomic na compact, ihuenyo agba 2.4-inch na igwefoto azụ, iji nwee ike ịhazi ma sụgharịa ọbụna akwụkwọ mmado na ozi anyị nwere ike ịchọta n'okporo ámá nke mba ọzọ. Ekele maka njikọ ikuku, ọ na-enye ohere nsụgharị na nsụgharị ozugbo na nsụgharị nke ihe ruru asụsụ 105, yana nkenke ọfụma na-achọ.
Ọ bụrụ, na ntụghị aka, anyị na-achọ ndị ntụgharị asụsụ kachasị elu echebere maka ndị ahịa azụmaahịa, ngwaọrụ izizi ịtụle bụ Basque Obere 2, dị na Amazon maka ihe na-erughị € 300.
Imewe a na-echetara ọgbọ gara aga Apple iPod Minis, na maka mbugharị dị mfe, ọ na-abịakwa na ikpe dị mma, yabụ ị nwere ike iburu anyị mgbe niile na-atụghị egwu mmebi ma ọ bụ ọnwụ. Dị ka onye ntụgharị, ọ na-akwado asụsụ 50, na-enye ntụgharị ntụgharị okwu bidirectional ma nwee ike jikọọ na netwọkụ data mkpanaka ọ bụla n'efu, ebe ọ bụla n'ụwa (ekele maka nkwekọrịta ngagharị nke ndị nrụpụta, nke na-ekwe nkwa nnweta site na LTE).
Ọ bụrụ na, na ntụle, anyị na-achọ kọmpat na uru ụzọ ntụgharị asụsụ ụzọ abụọ dịka ekweisi, anyị nwere ike ilekwasị anya na ngwaahịa dị elu. WT2 Gụnyere, dị na Amazon maka ihe na-erughị € 200.
Ekweisi ndị a na-echetara anyị Apple AirPods mana ha na-arụ ọrụ dị ka ụzọ abụọ na ndị ntụgharị okwu ụwa, n'akụkụ ngwa ahụ (nke etinyere na ngwaọrụ mkpanaka anyị). Ozugbo ejikọrọ na ngwa ntụgharị asụsụ raara onwe ya nye, ihe ị ga - eme bụ inyefe onye mkparịta ụka anyị aka na ịmalite ịgwa ekwentị ọzọ: anyị nwere ike ịsụ asụsụ anyị, onye ọzọ ga-aghọta anyị, anyị nwekwara ike ịghọta ihe niile. ọ na-ekwu. Onye ntụgharị a dị egwu na-atụgharị asụsụ ruru asụsụ 40 dị iche iche na ụda olu 93, yabụ ị nwekwara ike ịghọta mkparịta ụka nke mpaghara ụfọdụ akọwapụtara na mba ahụ.
Jiri ama dị ka ezigbo onye ntụgharị okwu
Na-enweghị ịzụta ihe ọ bụla, ị nwekwara ike iji Google Translate ezigbo oge onye ntụgharị okwu gịnị na-akụkwa tinye ya na Google Assistant nke dị ugbu a na ngwaọrụ gam akporo na iPhone. Ntụgharị asụsụ ahụ na-akwado ngụkọta nke asụsụ 44 ịhọrọ, gụnyere Arabic, Bekee, French, German, Greek, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ozugbo agbanyere ntụgharị okwu, ị nwere ike ị banye n'ime ngwaọrụ iji nweta ntụgharị asụsụ gosipụtara na ihuenyo ma gụọ ya Google Assistant, yabụ ị nwere ike ịkparịta ụka n'etiti ndị na-asụ asụsụ dị iche iche.
Otu esi eme ka onye ntụgharị okwu rụọ ọrụ nke Google Assistant
Na ekwentị gị, mepee Google Assistant site na ịsị "Ok Google" ma ọ bụ site na imeghe ngwa Google na ịpị bọtịnụ igwe na ogwe ọchụchọ. Iji malite usoro ntụgharị okwu, kwuo naanị "Ndewo Google, bụrụ onye ntụgharị okwu m nke Russia"ma ọ bụ asụsụ ị chọrọ. I nwekwara ike iji iwu olu ndị ọzọ dịka:"Nyere m aka ịsụ Spanish"ma ọ bụ"Nsụgharị si Romania gaa Dutch"Ma ọ bụ nanị:"Onye ntụgharị okwu French"O"Mee ọ rụọ ọrụ ntụgharị asụsụ".
Ọkachamara ga-ajụ gị ka ị pịa bọtịnụ igwe ma bido ikwu okwu. Na ihuenyo ị nwere ike ịgụ ozugbo na ntụgharị okwu yana usoro nzaghachi n'asụsụ atụgharịrị iji gaa n'ihu na-enwe mkparịta ụka were were.
Ruo afọ ole na ole gara aga, ndị nsụgharị zuru ụwa ọnụ bụ akụkọ sayensị dị ọcha, ebe taa a na-azụ ha n'ụzọ dị mfe na Amazon ma na-arụkwa ọrụ nke ọma, na-enyere anyị aka imeri nsogbu asụsụ mgbe ha na-aga mba ọzọ.
N'ihe banyere ndị ntụgharị asụsụ oge niile, anyị na-akwado ka ị gụọ ntuziaka anyị Etu esi eji onye ntụgharị okwu ma tụgharịa asụsụ n'otu oge.
Anyị na-achọ onye ntụgharị ụzọ abụọ maka Skype? Anyị nwere ike iji onye ntụgharị atụ agbakwunyere, dị ka a na-ahụ na ntuziaka anyị. Onye ntụgharị okwu Skype dị ka onye ntụgharị okwu akpaka na-eji olu na nkata vidiyo.